Momba anay - Ghorit Electrical Co., Ltd.
Ghorit Electrical Co., Ltd. dia natsangana tamin'ny taona 2000, manokana amin'ny famokarana, varotra ary serivisy ireo vokatra elektrika avo lenta.
Ghorit dia any amin'ny NO. 111 Xinguang Road, faritra indostrialy Xinguang, Tanànan'ny Liushi, faritanin'i Zhejiang, miaraka amina renivohitra voasoratra anarana 109,09 tapitrisa CNY, mahatratra 9 80000m ny velarany2 ary faritra fananganana 16000m mahery2.
Ghorit dia miavaka indrindra amin'ny sokajy 5 misy vokatra misy voltatra 6 ~ 40.5kV: ① fitaovana elektrika HV any ivelany; Devices Fitaovana fanamoriana tambajotram-pifandraisana herinaratra; ③ fitaovana elektrika misy herinaratra avo lenta ao anaty; ④ switchgear sy singa voafetra feno herinaratra; ⑤ andian-tsarimihetsika avo lenta avo lenta.
Ghorit dia mandray ny teknolojia mandroso ao an-trano sy any ivelany, ary manolo-tena amin'ny famokarana sy famokarana vokatra avo lenta. Tamin'ny taona 2012, nahazo ny mari-pankasitrahana momba ny siansa sy ny teknolojia any amin'ny faritany Zhejiang; tamin'ny 2013, dia nahazo ny mari-pahaizana High-tech Enterprise; nandritra ny vanim-potoana, dia nahazo teknolojia patentam-pirenena am-polony. Ny orinasa dia nifikitra hatrany tamin'ny fotokevitra fototra momba ny fahavelomana miaraka amin'ny kalitao avo lenta, nandany ny rafitra fitantanana kalitao IS09001: 2008, GB / T28001-2011 / OHSAS18001: 2007 fenitra momba ny fahasalamana sy ny fiarovana ny asa ary ny IS014001: 2004 fenitra momba ny rafitra fitantanana tontolo iainana; tamin'ny 2014 dia nandalo ny State Grid Corporation Fanamarinana ireo mari-pahaizana mpamatsy; Tamin'ny taona 2016, dia nahazo mari-pankasitrahana ho an'ny mari-pahaizana momba ny fividianana fitaovana ao anaty Mongolia Electric Power (Group) Co., Ltd.Ny vokatra Ghorit dia manana fampisehoana sy traikefa amin'ny sehatra maro toy ny State Grid, South Grid, Petrochemical System, Orinasa mpamokatra herinaratra, lalamby, fitantanan-draharaha monisipaly sns, ary koa amin'ny tsena iraisam-pirenena toa an'i Russia, Ukraine, Vietnam, Kazakhstan, New Zealand, Peru, Poland, Turkey, sns.
Ghorit dia nanangana rafitra fitantanana tambajotra ERP mandroso sy rafitra famolavolana fanampiana amin'ny solosaina. Miaraka amin'ny heriny matanjaka matanjaka, teknolojia famokarana mandroso, fomba fitsapana tonga lafatra, kalitaon'ny vokatra avo lenta, ary ampiarahina amin'ny filan'ny fampandrosoana maoderina ny herin'ny tokantrano, ny Ghorit dia manohy mampivoatra ny teknolojia mitarika tsena sy vokatra mahomby indrindra. Ghorit dia manome ny mpanjifa vokatra avo lenta, avo lenta ary serivisy tsara, ary mandray anjara betsaka amin'ny fampandrosoana ny indostrian'ny angovo.